Majaladda "Nidaamka Baradhada" - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda majaladda "Nidaamka Baradhada"
Calaamadda: majaladda "Nidaamka Baradhada"
Cadadkii ugu dambeeyay ee joornaalka Nidaamka Baradhada ayaa laga heli karaa arjiga mobaylka
Akhristayaasha sharafta lahow! Fadlan ogow: dhammaan agabka tirsiga labaad ee joornaalka Nidaamka Baradhada ayaa mar horeba laga heli karaa codsigayaga moobilka: www.potatosystem.news/page-ks
Cadad cusub oo ah majaladda Nidaamka Baradhada ayaa loo diyaarinayaa siidaynta
Saaxiibada iyo la-hawlgalayaasha qaaliga ah! Tifaftirayaasha majaladda Nidaamka Baradhada waxay diyaarinayaan arrin cusub oo daabacaadda (No. 2, 2022) si loo sii daayo. Majaladda ayaa la sii deyn doonaa dhamaadka...
Waxaan bixinaa taageero macluumaad!
Joornaalka Nidaamka Baradhadu waxa uu u bilaabayaa olole taageero macluumaad la-hawlgalayaasheena: illaa dhammaadka May 2022, waxaan daabici doonaa wararka kuwan ...
Ku biirista bilaashka ah ee majaladda Nidaamka Baradhada
Waxaan sii wadnaa ololaha loogu talagalay iska-diiwaangelinta bilaashka ah ee joornaalka Nidaamka Baradhada ee beeraha baradhada iyo khudradda Ruushka. Waxaan ku martiqaadeynaa dhammaan beeralayda baradhada iyo ...
Sannad Cusub Farxad Leh!
Akhristeyaasheena qaaliga ah! Hadda waxa la joogaa wakhtigii aan macsalaamayn lahayn 2021. Way ka duwan tahay oo waxay keentay caqabado badan, laakiin hadda ...
Fiiro gaar ah! Bixinta "kulul"!
Waxa jira afar bog oo bilaash ah oo keliya ayaa u hadhay macluumaadka xayaysiiska ee afraad (ugu dambeeya 2021) ee majaladda Nidaamka Baradhada. Waxaan ku martiqaadaynaa...
Cadadka afaraad ee majaladda “Baradho System” ayaa loo diyaarinayaa in la sii daayo
Saaxiibbada iyo saaxiibbada qaaliga ah! Guddiga tifaftirka ee majaladda System Potato ayaa si firfircoon uga shaqeynaya diyaarinta sii deynta cadadka soo socda ee daabacaadda (No. 4, 2021). ...
Shan sababood oo loo rakibo codsi guur -guura ee majaladda System Potato
Waxaad dooneysaa inaad la socoto wararka warshadaha ee ugu dambeeyay, waxaad xiiseyneysaa fikradda khubarada, talooyinka xirfadleydu waa muhiim. Abka aan ku daabacno ...
Cadadka saddexaad ee majaladda “Baradho System” ayaa loo diyaarinayaa in la sii daayo
Tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha Sebtember, waxaa la daabici doonaa arrinta dayrta ee majaladda (Nidaamka Baradhada No. 3, 2021). Mowduucyada muhiimka ah ee majaladda cusub: Siyaabaha lagu garto dalagga baradhada, ...
Majaladda Nidaamka Baradhadu waxay bixisaa iskaashi
Tirakoobku wuxuu caddeynayaa in adeegsadayaasha internetka ee casriga ahi ay sii kordhayaan doorbidaan inay shabakadda ka galaan taleefannada casriga ah, qaar badanna waxay u arkaan inay ku habboon tahay in la isticmaalo biraawsarka ...